Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dhimma Hidha Haaromsaa irratti waliigalan - BBC News Afaan Oromoo
Marii dhimma Hidhaa Haaromsaa Abbayaarratti afeerraa Ameerikaatiin Waashingiteenitti taasisanii Itoophiyaa, Masriifi Sudaan waliigaltee dhumaarra gahuuf waliigalaniiru.
Keessumaa akkaataa Hidhi Haaromsaa Itoophiyaa bishaan itti guutamuu qabuufi tajaajila itti kennuu qaburratti gara fuula duraa walitti fufinsaan mariyachuf walii galaniiru.
Mariin dhimma Hidhaa Guddicha Laga Abbayaa biyyoota sadan gidduutti ture erga Masiriin araara jaarmiyaan idil-addunyaa gidduu akka seenuu qabu gaafattee addaan cituun isaa ni yaadatama.
Ameerikaa magaalaa Washigintan Diisii keessatti Ministira Qabeenyaa Ameerikaafi pireezidantii Baankii Addunyaa waliin kan mari'atan ministiroonni haajaa alaa biyyoota sadanii Amajjii 15 bara 2020 dura waliigalteerra gahuuf waliigalan.
Waliigalteen dhumaa irra gahamu waan hunda kan hammatu, wal-ta'iinsa kan qabuu fi hunda kan fayyadu akka ta'us waliigalameera.
Waliigaltichi qajeeltoowwan bara 2015 biyyootni sadan irratti waliigalan bu'uura godhachuun akka raawwatamus biyyoonni sadan ibsa waloo baasaniin himaniiru.
Itoophiyaan dhimma Abbayyaarratti mariin koree tekinikaa itti fufuu qaba jette
Akka ibsi kun jedhutti biyyootni sadan sadarkaa ministiroota bishaaniitti walgahiiwwan teeknikaa afur kan mootummaan Ameerikaafi Baankiin Addunyaa deeggartootafi taajjabdoota ta'anii irratti hirmaatan ni ta'u.
Haala waliigaltichi itti adeemaa jiru madaaluuf ammoo Mudde 9 bara 2019 fi Amajjii 13 bara 2020 Washingitan Diisiitti wal arguuf murteessaniiru.
Amajjii 15 bara 2020'tti waliigaltee dhumaarra hin gahan yoo ta'e, qajeeltoowwan bara 2015 mallatteessan keessaa keewwatni 10 hojiirra oola jedha ibsi waloo isaan baasan.
Keewwatni kun qaamni sadaffaa jidduu isaanii seenee akka isaan araarsu ykn jaarsummaa taa'u biyyoonni sadan waliin ta'uun gaafatu jedha.
Laga Abbayyaa/Naayil misoomsuun badhaadhina biyyoota sadaniifuu murteessaa ta'uu kan waliigalan biyyoonni sadan, walta'iinsiifi faayidaa waloo tiksuun barbaachisaa ta'uu waliigalaniiru.
Ministiroonni biyyoota sadanii marii kana dura Pireezidantii Ameerikaa Donaal Tiraamp waliin wal arganii mari'atanii turan.
Marii kana dura BBC'f yaada kan kennan dubbi himaan Ministeera Dhimma Alaa Itoophiyaa Obbo Nabiyaat Getaachoo Itoophiyaan gara Ameerikaa kan deemtu mariif qofa akka ta'e himanii turan.
Kaayyoon marii kana qopheessuun ministiroota afeeruun barbaachiseef biyyoonni sadan hangam waliin dubbachaa akka turan isaanumarraa dhaga'uudhaaf waan kaayyeeffate fakkaata jedhan.
Jilli gama Itoophiyaatiin marii Ameerikaa Waashiingitan Diisiitti gaggeeffame kanarratti hirmaates Itoophiyaan Abbayirrraa mirga fayyadamtummaa haqa qabeessa akka qabdu hubachiisaniiru.
Dhimmoonni ijaarsa Hidha Haaromsaarratti ka'an mariidhan akka hiikaman Ameerikaan tumsa taasisteef mootummaan Itoophiyaa galateeffateera.
Mariin dhimma Laga Abbayaarratti Waashingiteen irratti gaggeeffame kun marsaa lamaan ture.
Kan jalqabaa bakka Pireezdaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp argamanitti Masaraa Adiitti kan gaggeeffame yammuu ta'u, kan lammaffaammoo bakka itti-gaafatamaan Dhaabbata Maallaqaa Ameerikaa Steevan Maniichiiniifi Pireezdaantiin Baankii Addunyaa Deeviid Maalpaas argamanitti galma walga'ii Ministeera Maallaqaa Ameerikaatti gaggeeffameera.
Ityoophiyaan ummata elektiriika hin argatin miiliyoona 70 qaqqabsiisuuf, akkasumas hiyyummaa hir'isuuf hojii hojjechaa jirtuun ala eenyuuniyyu miidhuuf yaada akka hin qabne ibsiteetti marii kanarratti.
Ityoophiyaan waldhibdeen yoo jiraatutti mariidhan akka hiikamu fedhii qabaachuu, dhimmi Hidhaa Haaromsa Abbayaa teeknikaan qofa akka ilaallamu, yaadni siyaasaa sirrii hin taane faayidaa akka hin qabaatinis hubachiisteetti.
Mariiwwan taasifamanirratti Ameerikaafi Baankiin Addunyaa taajjabdummaan ni hirmaatus jedhameera.
Koreen teeknikaa Ityoophiyaa, Sudaaniifi Masirii yeroo dhoyoo keessattis Finfinneetti walga'iisaa akka gaggeessu Ityoophiyaan affeertetti.
Pirezdaant Traamp hidhi Haaromsaa yammuu xumuramutti ebbarratti argamuu akka barbaadan ibsaniiru.
Marii Waashiingitanitti gaggeeffamerratti Ministirri Ministeera Dhimma Alaa Itoophiyaa Obbo Gadduu Aandaargaachaw, Ministirri Ministeera Bishaan Jallisiifi Inarjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaan hirmaataniiru.
Itoophiyaan mariin koree teekinikaa dhimma Hidhaa Haaromsaa Laga Abbayaa akka itti fufuu qabu ejjennooshee beeksifte